I was named after this First Burmese Doctor who also translated the 1001 Arabian Nights into Burmese (in Burmese) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Four Martyred or Shaheed Burmese Muslim Saints (in Burmese)
Different values of caring the aged parents in Myanmar and in Developed countries (in Burmese) »
That doctor’s name was Dr Syed Abdul Rahman.
By the way my father’s name is Sheik (Syed) Mohammad Zafrudin. So my real name should be Dr Sheik Abdul Rahman.
Malaysia’s first Prime Minister was Tunku Abdul Rahman or Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. I wrote to him from Burma, applying for the job. His Secretary General Dato’ Ahmad Noordin replied my letter and later given me the job.
Malaysia’s first King was Tuanku Abdul Rahman ibni Almarhum Tuanku Muhammad.
တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များ ကို မြန်မာမှုပြုခဲ့သူဦးဖိုးသာဇံခေါ် ဒေါက်တာအက်စ်အေရာမန်သည် ၂၉ ဇူလိုင်၁၉၁၆တွင်မေမြို့(ပြင်ဦးလွင်) ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသည်။ ၁–၈–၁၉၁၆ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်ဂေဇက် သတင်းစာတွင် ဒေါက်တာရာမန် ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်သူအပေါင်းမှာလည်း တတ်ကျွမ်းသော ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဒို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကြီးများ
သမားတော်ကောင်း တစ်ယောက်နှင့်တာဝန်သိသိဇွဲရှိရှိ ဆောင်ရွက်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဆုံးရှုံးကြရလေသည်‘
၃။ စာဆိုတော်များအတ္ထုပ္ပတ္ထိ (မောင်ခင် မင်–ဓနုဖြူ) ငွေတာရီ ၁၉၉၆(မောင် သုတ)
ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဒို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကြီးများ Page- 31 –မြန်မာမွတ်စလင်ကျောင်းသားလူငယ်များ
၁ ဇန်နဝါရီ ၁၈၇၀ – ၂၉ ဇူလိုင် ၁၉၁၆)ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ဒေါက်တာ ရှိတ် အဗ္ဗဒူရာမန်(ခေါ်) ဒေါက်တာ အက်စ်အေရာမန် ( Dr.S.A.Rahman ) ၏(၉) လအတွင်း ဆေးပညာဘွဲ့ဆွတ်ခူးခဲ့သည့်အတွက်(ခရိုင်) ဆရာဝန်ကြီးအဖြစ် ရာထူတိုးမြှင့် ခံရသည်။ ထိုရာထူးကို မြန်မာလူမျိုးတို့အား မည်သည့်အခါကမျှ မပေးခဲ့ချေ။မြန်မာလူမျိုးတို့ အနက်ပထမဆုံး ခရိုင်ဆရာဝန် ရာထူးကို ရရှိခဲ့သည်။ ထိုရာထူးဖြင့် သုံးခွ၊ ရမည်းသင်းရွှေဘို၊ ဖျာပုံ၊ကသာမြို့များသို့ သွားရောက်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၀၇ တွင် ကျောက်ကြီးရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ဟံသာဝတီခရိုင်တွင် တာဝန်ကျသည်။ ပလိပ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နှိုးဆော်ရေးတာဝန်ကို ရန်ကုန်မြူနီစီပယ်အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာစာပေတွင် ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်သောကြောင့် ပထမသူနာပြုသင်တန်းစာကိုပြုစုပေးခဲ့သည်။ သို့သော် မပြီးဆုံးခဲ့ချေ။ မြန်မာစာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ လုပ်ငန်း တာဝန်ကျေပွန်မှု၊ ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေမှု၊လူထု၏ ချစ်ခင်လေးစားမှုတို့ကြောင့် ကြီးလေးသောတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည်။ သူ့တွင် ဆီးချိုရောဂါရှိနေမှန်းသိသော်လည်း ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေသော ကာလဖြစ်၍ စစ်မြေပြင်သို့သွားရန်ဆရာဝန်အမြောက်အမြား လိုနေသောကြောင့် အနားယူ ဆေးကုခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး တိုင်းပြည်အပေါ်ကိုယ်ကျိုးစနွ့်၍အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၁၆ ခု ဇူလိုင် ၂၉ ရက်၁၉၁၆ ခု ဩဂုတ်လ ၁ ရက် အင်္ဂါနေ့ထုတ် ရန်ကုန်ဂေဇက် သတင်းစာတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဒေါက်တာရာမန်ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်သူများ အပေါ်တတ်ကျွမ်းသော သမားတော်ကောင်းတစ်ယောက်နှင့်တာဝန်သိသိဇွဲရှိရှိ ဆောင်ရွက်တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဆုံးရှုံးကြလေသည် ဟုဂုဏ်ပြုရေးသားခဲ့သည် ။
Page- 32 –မြန်မာမွတ်စလင်ကျောင်းသားလူငယ်များ
This entry was posted on March 16, 2010 at 10:57 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.